Arin foolxumo ah oo lagu sameeyay gabar Muslim ah oo uurleh | Somaliska
Gabar Muslim ah oo uurleh ayaa maalintii arbacada waxaa ficil foolxumo ah ku sameeyay nin mooto saaran. Gabadhaan oo la socotay seygeeda bartamaha magaalada Södertälje ayaa nin mooto saaran si kas ah u jiiray, isagoo wadada ka soo baxay oo ugu yimid marshabiyeediga. Booliska ayaa sheegay in arintaan ay tahay mid ku salaysan isir naceyb isla markaana baaritaan ay wadaan.
Seyga ayaa markii ay arintu dhacday waxa uu isku dayay in uu goobta ku hayo ninkii mootada saarnaa inta boolisku uu ka imaanayo balse waxaa goobta yimid koox kale oo mooto saaran kuwaasoo garaacay gabadha seygeeda, Isla markaan ka baxsaday goobta inta aysan boolisku imaan.
Booliska ayaa dadka goobta ku sugnaa ka dalbaday in ay la soo xiriiraan haddii ay wax macluumaad ah ay ka hayaan dhacdadaan iyo aqoonsiga ninkaan arinta foolxumada ah kula kacay gabadha Muslimada ah.
Ma ahan markii ugu horeysay ee gabdha xijaaban ee Muslimiinta ah lagula kaco ficilo guracan ee ku dhisan cunsuriyada. Sanadihii dambe ayaa Sweden waxaa ku soo batay naceybka iyo weerarada lagu qaadayo Muslimiinta iyo waliba qaasatan dumarka xijaaban.
Barafkii oo si rasmi ah u bilaabanaya